मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कुटपिट पछि सेवा बन्द - Kanakai Online
मेची प्रादेशिक अस्पतालमा कुटपिट पछि सेवा बन्द
बिरामी कुरुवाले अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात गरेपछि मेची अस्पताल भद्रपुरका चिकित्सकहरूले सोमबार बिहानदेखि सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेका छन्। अस्पतालका डाक्टरमाथि बिरामीका आफन्तले कुटपिट गरेको भन्दै चिकित्सकहरूले सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारेको छन ।
चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेसम्म सेवा सञ्चालन नगर्ने चिकित्सकहरूको अडान रहेको छ ।
आइतबार बेलुका करिब ५ बजे हल्दिबारीका पुष्पराज निरौलाले श्रीमती कञ्चनलाई उपचारका लागि मेची अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लगेपछि त्यहाँ विवाद भएपछि आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. केवल कपुरी माथि कुटपिट भएको थियो ।
डाक्टरमाथि बिरामीको आफन्त पुष्पराजले हातपात गरेको भन्दै अस्पतालका सम्पूर्ण मेडिकल अधिकृतहरूले आइतबार साँझ नै विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको भर्सना गरेका छन् ।
‘प्रहरीले आइतवार बेलुका घटनाको विषयमा जाहेरी लिन नमानेपछि यस्तो घटना फेरि डाक्टरमाथि दोहोरिन सक्ने भन्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पतालमा कामकाज अगाडी बढाउन नसकिने चिकित्सकहरुको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यता घटनाको विषयलाई लिएर अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतहरूसँग बिहान छलफल गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. टंकप्रसाद बाह्रकोटीले बताउँनुभयो । ‘मेडिकल अधिकृतहरू विरोधमा उत्रिएपछि अस्पतालको सबै सेवा ठप्प छ भएपनि आकस्मिक कक्षको सेवा सुचारु रहेको डाक्टर बाह्रकोटीले बताउँनुभयो ।
छलफलपछि डा. केवल कपुरीलगायत केही मेडिकल अधिकृतहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा जाहेरी दिएको बताइएको छ ।
यता बिरामीका आफन्त निरौलाले भने भनाभनका क्रममा डा. केवलले आफूलाई अपशब्द वोलेकाले हात हालेको स्वीकार गरेका छन ।
‘श्रीमतीलाई सञ्चो नभएपछि उपचारका लागि मेची अस्पताल लगिएको हो। आकस्मिक कक्षमा डाक्टर थिएनन्, डाक्टर केवल कपुरी ४५ मिनेटपछि आउनुभयो ‚’ निरौलाले भन्नुभयो ‚ ‘त्यही विषयलाई लिएर डाक्टर कपुरीसँग केही भनाभन भयो। भनाभनकै क्रममा उहाँले मलाई मलाई तत्लोस्तरको शब्द वोलेपछि मैले नै सुरुमा हात हालेको हो, त्यसपछि डाक्टरले पनि मलाई हात हाल्नुभएको हो निरौलाले भन्नुभयो ।
निरौलाले अस्पतालभित्र डाक्टरमाथि हात हाल्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। तर‚ एकजनाको गल्तीका कारण सम्पूर्ण बिरामीले सेवाबाट बञ्चित गराउनु नहुने निरौलाको भनाइ छ ।
July 19, 2021 1:27 pm | Uncategorized, अन्तरवार्ता, आर्थिक, खेलकुद, घटना, प्रवास, फिचर, फोटो ग्यालरी, बिज्ञापन, भिडियो, मनोरञ्जन, मुख्य खबर, राजनीति, लोकप्रिय, विचार, शिक्षा, समाचार, समाज, साहित्य, सूचना प्रविधि, स्थानीय समाचार